Sida khad looga saaro dharka: 8 siyaabo fudud oo waxtar leh
Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan dhaqin
Habka ugu fudud uguna waxtarka badan ee looga takhalusi karo wasakhda khadku waa in shayga wasakhaysan la geeyo nadiifiye engegan. Ma noqon doonto mid raqiis ah, sidaas darteed doorashadan ayaa xaq u leh oo kaliya marka la eego dharka ka samaysan alaab jilicsan oo qaali ah.
Ha ku badin dhaqidda. Mar kasta oo wasakhda cusubi ay sii badato, way fududahay in meesha laga saaro. Haddii khadku uu ku cunay dharka, ma aha oo kaliya guriga, laakiin sidoo kale hababka xirfadeed ee isticmaalaya reagents kiimikaad ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo aan awood lahayn.
Mar kasta oo ay suurtogal tahay, isticmaal walax nadiifin oo ganacsi ahaan diyaar ah oo ku leh calaamadda in ay ka saari karto khad. Diyaargarowga noocan oo kale ah ayaa leh kiimiko gaar ah oo la doortay oo waxtar u leh raadadka qalinka kubbadda.
Kahor intaadan isticmaalin alaabta wasakhda, ku tijaabi meel aan muuqan oo dhar ah, sida tolmada ama cududda hoosteeda ee gudaha dharka. Tani waxay hubin doontaa in midabka iyo midabka dharka aan la saameyn doonin.
Haddii habka aad dooratay uu shaqayn waayo, u gudub kan ku xiga.
Sida khad looga saaro wasakh
Wasaqda-saare ka-qaadista dukaanka-iibsatay ama saabuunta Antipyatin.
saabuunta dharka lagu dhaqdo.
Marso wasakhda ka saarta calaamadda khad ama iska masax sida lagugu tilmaamay tilmaamaha alaabta aad dooratay. Ku dhaaf 5-10 daqiiqo. Kadibna ku maydh biyo qabow. Ka saar wixii wasakh ah ee soo hadhay saabuunta dharka.
Sida caanaha khad looga saaro
Suufka suufka ah.
Biyaha heerkulka qolka.
Isticmaal suufka suufka ah si aad caanaha si deeqsinimo leh ugu faafiso calaamadda qalinka. Ku dhaaf 20-30 daqiiqo. Si loo sameeyo saameyn weyn, haweenka guriga qaarkood waxay ku talinayaan in wasakhda caanaha lagu qooyo dhowr saacadood, ama xitaa habeenkii.
Haddii khadku aanu gebi ahaanba baaba'in, waxaad si fudud u xoqin kartaa marada. Ka dib mashiinka dharka ku dhaq budo.
Sida khad looga saaro citric acid
Liin dhanaan oo cusub ama citric acid heerka cuntada.
Ku raaci aagga dharka ee qalinka kubbadda biyaha lagu shubay. Kadibna ku qooy suufka suufka ah ee liin ama xalalka citric acid ( nus qaado shaaha oo kiristaalo ah nus koob biyo diirran, si fiican u walaaq) oo si tartiib ah u xoq maro qoyan.
Stills: @NINEL, dukaamada dharka sare / YouTube
Biyo raaci aashitada, aagga ku xoq khal oo si fiican mar kale u raaci.
Sida khad looga saaro aalkolada la xoqay
Ammonium ama aalkolo caafimaad.
Ku shub aalkolo xoqan oo ku dul shub wasaqda khad. Si aad u dhex gasho dareeraha qoto dheer, ku daadi kubbadda suufka khamriga oo ku cadaadi xalka marada dhowr jeer. Ku dhaaf 20-30 daqiiqo.
Kadib, si taxadar leh oo xoog leh mar labaad wasaqda ugu tirtir suufka lagu qooyay khamriga. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad beddesho si aad u nadiifiso dhowr jeer.
Sida khad looga saaro budada mustard
Haddii aad rabto inaad tijaabiso habkan, la soco in iniin khardal uu wasakhayn karo marada. Sidaa darteed, ha tijaabin dharka cad ee barafka ama nigisyada – waxaa fiican inaad doorato ikhtiyaar nadiifin oo kala duwan iyaga.
Weel yar, sida saxan qoto dheer.
Caday duug ah.
Ku walaaq budada mustard in yar oo biyo ah ilaa ay noqoto mid dhuuban.
Adigoo isticmaalaya burushka cadayga, si deeqsinimo leh isku dar ah mari calamada qalinka. Ha xoqin!
Frames: @ Dhammaan ku saabsan mishiinnada dharka lagu dhaqo iyo qalabka guriga / YouTube
Khardal ku dhaaf 15 daqiiqo. Kadibna ku xoq burushka cadayga ilaa hal daqiiqo oo si fiican u raaci marada. Xitaa dhibco waaweyn ayaa si buuxda u baaba'a daaweyntan ka dib.
Sida khad looga saaro baking soda iyo khal
Diyaari xalka nadiifinta: ku dar dhowr dhibcood oo khal ah iyo shaaha oo ah baking soda ilaa nus koob oo biyo ah, walaaq. Marso isku dhafka dareenka leh wasakhda.
Ku dhaaf 15 daqiiqo. Ka dib wasakhda si fiican ugu xoq burushka cadayga oo marada ku raaci biyo nadiif ah.
Haddii calaamadda qalinka isha ay weli muuqato, ku dhaq saabuunta dharka lagu dhaqdo.
Sida loo tirtiro qalinka glycerin
Isticmaalka cadayga, mari glycerin wasakhda khad. Marka la nuugo, ku rid maro xal nadiif ah (laba litir oo biyo ah halkii qaado oo budo ah) oo fadhiiso 30 daqiiqo. Wasaqu ma baabi'i doono, laakiin wuu caddaan doonaa.
Kadibna dharka ku dhaq isla saabuunta saabuunta oo si fiican ugu raaci biyo nadiif ah.
Sida khad looga saaro xumbo xiirashada
Ku tuuji xumbo xiirashada meesha wasakhaysan. Sug inta ay degayso. Ka dib wasakhda si fiican gacmahaaga ugu mari oo ku raaci biyo nadiif ah.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Sida khad looga saaro dharka: 8 siyaabo fudud oo waxtar leh!